सेयर बजार २५ अंक घट्यो, लगानीकर्तामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको त्राश कायमै
२०७५ जेठ २४ गते १५:०७
काठमाडौं । सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लगाएको लाभकर हटेपनि लगानीकर्ता विश्वास नबढ्दा बिहीबारको सेयर बजार २५ अंक घटेको छ । बुधबार लाभकर तत्कालका लागि हटेपछि १३ अंकले बढेको बजार बिहीबार भने...
लाभकर व्यवस्था फिर्ता भएपछि लगानीकर्ता उत्साहित, नेप्से दोहोरो अंकले बढ्यो
२०७५ जेठ २३ गते १५:१९
काठमाडौं । सरकारले लाभकरकाे नयाँ व्यवस्था फिर्ता गरेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । जसकारण बुधबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । लगातार दुई दिन पछि खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक १३.९१ अंकले...
कारोबार खुल्नासाथ सेयर बजारमा छायो हरियाली, नेप्सेमा २१ अंकको वृद्धि
२०७५ जेठ २३ गते १३:३३
काठमाडौ । लगातार दुई दिनको आन्दोलन पछि खुलेको बुधबारको सेयर बजारमा एकाएक हरियाली छाएको छ । सरकारले लाभकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था फिर्ता गरेपछि बजारमा हरियाली छाएको हो । बोनस र हकप्रद सेयरमा लाग्ने लाभकर...
युनिभर्सल पावर कम्पनीले २१ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने, धितोपत्र बोर्डमा दियो निवेदन
२०७५ जेठ २२ गते १९:००
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ ।कम्पनीले २१ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डबाट...
सिभिल बैंकले १० प्रतिशत बोनस दिने, चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नाघ्ने
२०७५ जेठ २२ गते १५:२५
काठमाडौं । सिभिल बैंकले सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको १०.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि ०.५४ प्रतिशत(अर्थात ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ) नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ...
अन्ततः मंगलबारको सेयर कारोबार बन्द, सरकारले घुँडा टेक्ला त ?
२०७५ जेठ २२ गते १२:५९
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार खुलेपनि कारोबार भने बन्द भएको छ । सेयर लगानीकर्ता संघलगायत अन्य लगानीकर्ताका संस्थाले सेयर कारोबार नगर्न दवाव दिए पछि सो दिनको कारोबार बन्द भएको हो । सरकारले बोनस र...
लाभकर गणना गर्ने नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजार घट्यो
२०७५ जेठ २० गते १५:३७
काठमाडौं । आइतबारको बजार दोहोरो अंकले घटेर १३०० अंक तल झरेको छ । दिनभरको बजारमा नेप्से परिसूचक ३३.७१ अंकले घटेर १२७३ अंकमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएपछि पनि सेयर...
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १७९५ रुपैयाँ
२०७५ जेठ २० गते १४:५५
काठमाडौं । आइतबार मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको हकप्रद पछिको सेयरको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक हजार ७९५...
एनएमबि बैंकलाई एफपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति, प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँ
२०७५ जेठ २० गते १३:३२
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडलाई फरदर पब्लिक इस्यु (एफपिओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । कम्पनीले शुक्रबार एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपिओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएको हो...
« अघिल्ला 12345 … 196 पछिल्ला »